चम्सुरी’ले छोरीहरुसंग आफ्नो रोग लुकाउनुकाे यस्तो रहस्य! – Taja Khawar
चम्सुरी’ले छोरीहरुसंग आफ्नो रोग लुकाउनुकाे यस्तो रहस्य!
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १६:५८:२२
काठमाडौं । हाँस्य टेलिश्रृङखला ‘मेरी बास्सै’बाट चर्चामा आएकी हास्यकलाकार पल्पसा डंगोल ‘चम्सुरी’ दुवै मिर्गौला फेल भएपछि उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएकी छन् । उनको हाल त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भैरहेको छ । एक महिनाअगाडि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि पल्पसा टिचिङ अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पल्पसाले शनिवार निर्देशक तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौलालाई एसएमएसमार्फत आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएपछि उनको स्वास्थ्य समस्यावारे सार्वजनिक भएको थियो । दिपाश्रीका अनुसार पाँच वर्षअघि पनि पल्पसाको मिर्गौलामा समस्या देखिएको थियो । तर, छोरीहरुले थाहा नपाउन् भनेर आफ्नो रोग लुकाउँदै आएकी थिइन् । उनका दुई छोरी छन् ।****** यो स
काठमाडौँ-सन् ९० को दशककी चर्चित अभिनेत्री हुन्, करिश्मा कपुर । अहिले मूलधारको फिल्मबाट टाढा छिन् । कपुुर खानदानको भए पनि बलिउडमा बलियो स्थान बनाउनका लागि उनले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।
करिश्माले १५ वर्षको उमेरमै फिल्ममा डेब्यु गरिसकेकी थिइन् । उनको पहिलो फिल्म प्रेमकैदी १९९१ मा रिलिज भएको थियो । उनको अपोजिटमा साउथ अभिनेता हरिश कुमार थिए । जब उनले बलिउडमा प्रवेश गरिन्, उनको खुब मजाक बनाइएको थियो । उनलाई केटाजस्तो देखिने भनेर उडाइएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
आमिर खानसँगको उनको फिल्म राजा हिन्दुस्तानी सुपरहिट भयो । यही फिल्मले करिश्मालाई स्टार बनाएको थियो । तर, यो फिल्म करिश्मालाई भन्दा पहिले ऐश्वर्यालाई अफर गरिएको थियो । ऐश्वर्याले त्यो समय पढाइलाई प्राथमिकता दिएको कारण इन्कार गरिदिएकी थिइन् । यही फिल्ममा करिश्माले पहिलोपटक किस सिन दिएकी थिइन् ।
माचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Last Updated on: July 19th, 2021 at 4:58 pm